ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ရင် ဆုကြေးငွေ ဘယ်လော...
12 พ.ค. 2562 - 20:43 น.
ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ့် အသင်းဟာ အနည်းဆုံး ပေါင်သန်း ၁၅၀ အထိ ရရှိမှာဖြစ်
Sky Sport နဲ့ BT Sport ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေကို ယူကေမှာ အဓိက ရုပ်သံ ပြသခွင့်ရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စံချိန်တင် ပေါင် ၁၅၃သန်း အထိ ရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ချန်ပီယံ ချယ်လ်ဆီး
မန်စီးတီးဟာ မနှစ်က ရမှတ် ၁၀၀ရပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲပေမယ့် ၀င်ငွေအရပ်ရပ်မှာ ဒုတိယ နေရာမှာသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၉ အထိ ၅ဘီလျံကျော် ရုပ်သံ စာချုပ်
อัลบั้มภาพ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ရင် ဆုကြေးငွေ ဘယ်လောက်ရမလဲ